Umtsalane wokuba neenwele ezingwevu | Amadoda aQinisekileyo
Nangona ngamanye amaxesha ubusongele ukuba uza kuzidaya, uninzi luyathandabuza amakhubalo ezinto ezingwevu. Nangona amanye amadoda enyanzelisa ukubasusa, iingcali ezininzi ziyavuma ukuba iinwele ezingwevu luphawu lokuvuthwa, uphawu olunokuba lunomdla omkhulu kwaye lube nomtsalane kwabasetyhini.
Okulandelayo, sihlalutya umtsalane weenwele ezingwevu sikhethe iimveliso ozifunayo ukuze ube nomtsalane. Ukuba uneenwele ezingwevu, kubalulekile ukuba uhlambe iinwele zakho kunye nemveliso ethile ukuthintela ukutyheli, kuba olu hlobo lweenwele, luswele i-melanin, ludibanisa ngokukhawuleza ngenxa yesenzo semitha ye-UV okanye ezinye izinto zangaphandle.
Ukuba ufuna ukuzifihla:
Sikucebisa: Uqweqwe 5 'ngu-L´Oréal Professionnel Homme.
Unyango olwonyusa umbala wendalo, usenza iinwele ezimhlophe zidibane neenwele ezimnyama. Isetyenziswa njengeshampu kwaye yomeleza iinwele zokhuselo lwendalo ngokuchasene nogonyamelo lwangaphandle.
Ukuqaqamba nokomeleza iinwele:
Sikucebisa: Umbala weCamo nguRedken waMadoda.
Ukongeza kukufihla iinwele ezingwevu ngendlela eyiyo kwimizuzu eli-10, zomeleza iinwele kwaye zongeza ukukhanya.
Ukuhlamba imihla ngemihla:
Sikucebisa: Shampoo yesilivere nguWella Amadoda nje.
Ukongeza ekulweni imibala eyahlukileyo etyheli, inika idosi eyongezelelweyo yokuqaqamba.
Umthombo: Ukuya exesheni
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Umtsalane wokuba neenwele ezingwevu
URebeca Larios Escalona sitsho
Ndingumfazi. Ndinomdla wokugcina iinwele zam ezingwevu. Andinqweneli ukuzifihla. Ngaba ikhona into endiyifunayo? ... Ngaba uyayenza «iimvavanyo zaselebhu kwizilwanyana? ... ndinomdla kwimveliso yakho, kodwa impendulo eyiyo kulo mbuzo iya kumisela ukuba ngubani oyithengayo okanye hayi.
UJose Manuel sitsho
Molweni zihlobo, ngokuchaseneyo ndinqwenela ukuba neenwele ezingwevu ezingakumbi .. ziqala ukuphuma kwaye zintle emini .. ziyakhazimla kwaye zikunika isimbo kunye nobuntu .. ngenwele elungileyo .. imibuliso
Phendula kuJose Manuel
UWilly Scob sitsho
Ndingu-ash blonde, ndingu-44 kwaye kumakhulu ndinento eninzi kwaye sele bendixelele ukuba kuyo yonke intloko yam, ndifuna ukwazi ukuba ikhona imveliso ukuze baphume ngokukhawuleza nangakumbi
Ndineenwele ezingwevu ezimhlophe qwa nezimenyezelayo, ndizikhawulezisa njani ukubonakala kweenwele ezingwevu ngakumbi?
Indlela ukufumana iingalo eziphawuliweyo?